Ngaphandle kwayo yonke into oovimba beMacBook Pro bakwiirekhodi | Iindaba zeGajethi
Ukuphela kwenyanga ka-Okthobha kuyeyona nto iphambili ekubonisweni kwezixhobo ezitsha ze-Apple ngokwe-MacBook Pro yoluhlu kwaye ezi khange zibonwe kakuhle ngokweenkcukacha zazo, izibonelelo kunye nexabiso, zombini ngendlela abasebenzisi beendaba ezizodwa . Kuyinyani ukuba iApple ayishiyanga ikhonkco elinye liphila ngaphandle kweThunderbolt 3 - USB C kunye ne-3,5 mm audio jack kwizixhobo zabo ezintsha, kodwa oku akunako ukusibekekisa ezinye iindaba kunye nophuculo olwenziweyo kwizixhobo.
Okwangoku sonke sicacile ukuba iMac entsha iyasifanela okanye hayi, kuba ngokwentsebenzo kunye nexabiso kuyacaca ukuzichaza, kodwa amagama esigqeba senkampani uPhil Shiller aya phambili kwi udliwano ndlebe Ecacisa ukuba oovimba bala maqela zilungile kangangokuba bezingazange zibonwe ngaphambili.
Ngelixa uninzi lwamajelo eendaba kunye nabasebenzisi bezinikezela ukugxeka (ngezizathu ezingaphezulu okanye ezingaphantsi) iMacBook Pro entsha eneTouch Bar, ubunzima obuphantsi, iprosesa engcono kunye ne-ID yokuChukumisa phakathi kolunye uphuculo olwenziwe, ukubhukisha kungaphezulu kwesibikezelo kunethemba. I-Apple ayinikanga inani elisemthethweni loku kugcinwa nokuba kusengqiqweni ukuba akunjalo, kodwa konke oku kuyakutyhilwa ekupheleni kukaJanuwari 2017, kulapho manani okuthengisa okwenyani ayakuboniswa kwaye kuyakwenzeka ukubona ukuba ngaba iiProses ezintsha zeMacBook zikwazile na ukubonelela ngentengiso.
Singayithanda iMac entsha ngaphezulu okanye ngaphantsi, sinokucinga ukuba iyabiza okanye ayibizi, sonke sinokuba nolwethu uluvo ngayo, kodwa into ebonakala icacile kukuba iya kuphakamisa ukuzithemba (kancinci ngaphezulu) kwiCompertino eqinileyo ukuba bayakwazi ukongeza ukuthengisa okuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Ngaphandle kwayo yonke into oovimba beMacBook Pro bakwirekhodi
I-Google Pixel ithengise ngaphandle i-Nexus 6P kwiveki yokuqala